150W MP3 Car Power Amplifier - CZH / Fmuser Fm Transmitter China Nye Nye Kpọtụrụ: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
home » 150W MP3 Car Power ampilifaya
Ihe osise eserese:
N'ebe a, ọ bụ eserese nke igwe okwu na-ekwu okwu. LF353 nke, Onye Semiconductor nke Ọchịchị, na-aga kewaa akara ụda olu gaa n'olu atọ. SANYO'S LA47536 ga-eme ka mgbaàmà ndị a dịkwuo elu. Na stereo mode, anyị ga-eme ihe nke ndị ọkà okwu asatọ dị elu ga -emepụta ụda dị oke mkpa.
Bandzọ Njikọ atọ Na-arụ Ọrụ:
LF353 Wide Bandwidth Dual JFET Input Ntinye Nrụọrụ
Ngwaọrụ ndị a dị ọnụ ala, oke ọsọ, ihe ntinye arụmọrụ JFET nkeji abụọ na tebul eletriki mgbanaka (BI-FET II). Ha choro mmanu di ala ugbua ma ha nwere nnukwu uru maka ihe omuma n’onu na igba oso oso. Na mgbakwunye, ngwaọrụ ntinye JFET dị elu nke ọma na-enye ndenye ọfụma dị ala na weghachite okwute ugbu a. The LF353 bụ pin dakọtara na ọkọlọtọ LM1558 na-enye ohere ndị na-emepụta imeziwanye ihe ngwa ngwa nke arụmọrụ LM1558 na LM358 dị. Enwere ike iji amplifiers ndị a na ngwa dịka sọmpi ọsọ ọsọ, ntụgharị ngwa ngwa D / A, ịlele ma na-ejide sekit na ọtụtụ sekit ndị ọzọ chọrọ voltaji mgbanaka dị ala, ntinye dị ala ugbu a, ntinye ntinye dị elu, ọnụego dị elu na bandwidth sara mbara. Ngwaọrụ ndị ahụ na-egosịkwa mkpọtụ dị ala na ebelata ọkụ eletrik. (Semiconductor nke mba)
Voltala gbanyere ọkụ n'ime mpụga: 10 mV
Obere ndenye nwere ugbu a: 50pA
Mpempe ụda mkpọtụ dị ala: 25 nV
Mkpọtụ ntinye dị ala: 0.01 pA
Nweta bandwidri karia: 4 MHz
Ọnụ ọgụgụ dị elu gburu: 13 V / us
Oke ọkọnọ dị ugbu a: 3.6 m
Ihe ntinye aka di elu: 1012.
Mgbakasị agbakasị obere ego: <0.02%
Obere mkpọtụ mkpọtụ 1 / f: 50 Hz
Oge idozi ngwa ngwa rue 0.01%: 2 anyị
Mgbe etinyere ampilifaya n'azụ igbe, anyị ga-achọ nkwụsị ọrụ nkwụsị. LA47536 nwere ọrụ nkwụsi ike na ya pin4. Osisi a chọrọ obere erughị elu karịa 2V na mmalite nkwupụta. Transistor Q1 na Q2 na-eme ka ọrụ nke ije na-akwụsị maka anya. Mgbe onye ọ bụla na-akwọ ụgbọala na-eme ka njiri mara aka ekpe, jiri ọkụ azụ ma ọ bụ pịa na breeki, oriọna na-agbanye na-akwọ ụgbọala Q2 onye ọ mere ọbụna iji chụpụ Q1 onye na-etinye mgbagha> 2V na pin4 Isi okwu
LA47536 anọ ọwa 45 W BTL Car Audio Power Amplifier
LA47536 bu ihe ntanetị BTL ike nkwupụta ọkụ IC mepụtara maka iji na sistemụ ụgbọ ala. Mmepụta nke njiri mara
- Ọdịmma dị ọcha nke na-eji V-PNP transistors n'akụkụ dị elu na NPN transistors n'akụkụ dị ala iji nye ike dị elu na njikwa ụda kachasị mma.
- LA47536 gụnyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ niile achọrọ maka iji ụda ụgbọ ala, gụnyere mgbanaka na-echere, ọrụ ịgbakwụnye, na sekit nchebe ọ bụla. Ọ na-enyekwa ọrụ nyocha onwe onye (nchọpụta outset nchọpụta out). (Sanyo)
1. Njikere ịgbanwee ọrụ (pin 4)
Ntọala mgbaji pin nke 4 ga-abụ 2 VBE. Mgbe Vst dị 2.0V ma ọ bụ karịa, ihe nrịbama ga-agbanye, mgbe Vst, bụ 0.7V ma ọ bụ belata, ihe ngosi ahụ ga-apụ. Mara na ntụtụ 4 chọrọ arụ ọrụ dịkarịa ala 40uA.
2. Ọrụ Na-emegharị ahụ
A na-esetịpụrụ IC ahụ na steeti dara ụda site na ịtọ pin 22 ka ihe nwere ike ịdalata. Na steeti a, a na-emegharị ụda olu. Ọ bụ RC elegharị anya ka atọrọ oge a ga-eji na-arụ ọrụ ọrụ a, ma oge a na - emetụta oke mkpọtụ na - eme mgbe agbanyere ma ọ bụ gbanyụọ okwu.
Oge a na-emegharị ya na ngbanyụrịrị maka ntụzịaka mpụga a na-atụ aro (R = 10k, C = 3.3uF) dị ka ndị a.
Muting na oge: 50ms
Ingmekorita oge: 20ms
3. Ọrụ Nchọpụta Onwe Onye (Mgbapụta ike ikwu okwu)
N'oge ana-arụ ọrụ steeti niile na-arụ ọrụ, LA47536 na-achọpụta, n'ime, ma ọ bụ na mpụga ihe nrụpụta ihe ọhụụ na-apụtaghị ma ọ bụ na-egosipụta nke a site na pin 25. Ngwa nwere ike gbochie ike gwụrụ ọkà okwu na nsogbu ndị ọzọ site na ịnwe sistemụ microcontroller chọpụta ntụtụ mgbapụta mmepụta 25 na ijikwa ma ọ bụ steeti njikere ma ọ bụ nye ọkụ eletrik. (Enwere ike iwepụta ihe na-adịghị ahụkebe dịka ọmụmaatụ, mgbapụta ikike ịgbada ike ugbu a.) A na-agbanyụ mgbama PIN 25 site na ịtọ ntụtụ 1 na ala nwere ike.
4. Oscillator ike
N'ụfọdụ, PCB osụk nwere ike imeghasị oscillations. Enwere ike iwepụ oscillation a site na ịgbakwunye ihe ndị edepụtara n'okpuru. Rịba ama na a ga-enyocharịrị ike maka ezigbo ihe ọ bụla site na inwale na steeti agbagoro na njedebe ngwaahịa. Jikọọ capacitor na resistor (0.1uF na 2.2) n'usoro n'etiti ntụtụ ọ bụla na ala.
5. Audio Ogo (Olu dị ala)
Enwere ike imeziwanye njiri ike nke ugboro ugboro site na ime ka ikike nke ntinye gbanwee. Ike a tụrụ aro bụ 2.2uF ma pere mpe.
6. Circuit nchebe
Ejikwala nbidopụta STBY na gburugburu 1.4V. Ọzọkwa, agbanyela IC na ọnọdụ dị n'ime ala nwere oge enyere gị ọfụma maka StBY voltaji.
Ọ bụ ezie na LA47536 na-agụnye sekit mgbochi mkpọtụ mkpọtụ, enwere ike ibelata mkpọtụ mkpọtụ ọbụna site na iji ọrụ muting yana. Mee ka ọrụ ịgbanye ugwu n'otu oge ahụ ka etinyere ike. Mgbe ahụ, ka ihe ngosipụta nke DC kwụsiri ike kwụsie ike, gbanyụọ ọrụ ịgbatị. Mgbe ị na-agbanyụ ihe nkwupụta ọkụ ahụ, buru ụzọ gbanyụọ ọrụ ịgbanye ọkụ wee gbanyụọ ike ọkọnọ. Twozọ abụọ a dị irè iji belata mkpọtụ pop.
Mpempe akwụkwọ Circuit E biri ebi: